Ntụle Semalt: Ọrụ nlekọta ihuenyo dị egwu
Web2DB bụ nyocha ihuenyo dị ike na bara uru na ngwá ọrụ mmepụta data. Ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-ewu nchekwa data ma na-enye anyị ohere ịkọwa ozi nke weebụsaịtị dị iche iche. Nke a nchịkọta weebụ na-anakọta ozi ndị a na-emebeghị site na weebụsaịtị na HTML peeji nke na-ahazi ma hazie ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Naanị ị ghaghị ịkọ ihe ịchọrọ ịchọọ na otú ịchọrọ ịkọwa data gị, Web2DB ga-arụ ọrụ ya dị ka ntụziaka. Enwere ike ịchekwa data na MySQL, CSV, Access na Excel formats. Web2DB nwere ọtụtụ atụmatụ nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka webmasters, ụlọ ọrụ, ndị ọchụnta ego, ndị mmemme, na ndị coders. Ụfọdụ n'ime atụmatụ ya dị iche iche na-atụle n'okpuru ebe a.
1. Dị ka Onye Nchịkọta Ụlọ Ọrụ:
Web2DB na-arụ ọrụ dịka onye nchịkọta ihe omume dị ike na ịtụnanya. Ịmepụta ọrụ ntanetị weebụ adịghị mfe ruo mgbe ị nwere nkà mmemme zuru ezu. Ma na Web2DB, ịkwesighi ịbụ onye mmemme ọkachamara ma ọ bụ coder n'ihi na ị nwere ike ịrụ ọrụ gị n'enweghị ya. Ngwaọrụ a ga-anakọta, dezie, m ma ọ bụ wepu data gị. Ọzọkwa, ọ na-enyere aka n'ịzụlite ụdị data dị iche iche nke na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke ọbụna mgbe nhazi ihuenyo agbanweela. A na-arụ ọrụ niile ị na-edezi na mmegharị ya na obere clicks.
2. Nwepụta ngwa ngwa nhazi ihe niile:
Ị nwere ike ịhazi Web2DB iji budata weebụsaịtị ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ibe ya. Ọ na-eji ngwa ngwa weghasị usoro ihe odide zuru ezu, na-enye ya ọdịdị dị mma. Ị nwere ike ịhazi otu ibe weebụ maọbụ saịtị ahụ dum dabere na ihe ị chọrọ, mana ogo ọdịnaya adịghị echegbu onwe gị. Ngwaọrụ a bara uru maka nnukwu saịtị dị ka Amazon, eBay, PayPal, na ndị ọzọ. Web2DB nwere ọdịdị dị elu dị iche iche ma nyere anyị aka ebuli arụmọrụ weebụ. Ọ bụ ngwá ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi na nke zuru ezu.
3. Nyefee Ụdị Weebụ:
Iji Web2DB, ị nwere ike ịdebe ụdị weebụ dị iche iche ụdị ụdị ọchụchọ na ụdị ntinye akwụkwọ n'ịntanetị n'enweghị ihe ọ bụla. Ụdị a nwere ike ịdebere maka ụkpụrụ niile ọ bụla, ma wepụtara data na usoro CSV. Ị nwekwara ike ịmepụta data dabeere na data site na iji usoro a ma nyefee saịtị gị iji chọpụta engines maka nhazi nkwekọrịta dị mma karị.
4. Na - arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị omimi:
Ihe ọzọ dị iche iche nke Web2DB bụ na ọ nwere ike ịme ma weebụsaịtị. Imirikiti ihe mmemme nke oge ochie enweghi ike wepu ọdịnaya nwere ike ịgụta site na weebụsaịtị. Ọbụna ndị ọkachamara web scrapers nwere nsogbu iwepụta data site na weebụsaịtị AJAX, mana Web2DB na-eme ka ọ dịrị gị mfe wepụ data sitere na saịtị dị ike. I kwesịrị iburu n'uche na data saịtị AJAX ga-ewepụta oge iji nweta ya.
5. Kwado ụdịdị dị iche iche:
Web2DB nwere ike mbupụ data gị na Excel, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, na Excel.Ị nwekwara ike iji akwụkwọ edemede mbupụ iji hazie mbupu data ma ọ bụrụ na ị nwere nkà mmemme mmemme. Web2DB nwere ike mbupụ ozi na Excel 2003 na Excel 2007 kwa ma nyere gị aka itinye ihe oyiyi ahụ na data gị dum. Ngwaọrụ a na - enyekwa spam nchebe, hụ na nchekwa na nzuzo gị na ịntanetị Source .